Abramu anonunura Roti (1-16)
Merekizedheki anokomborera Abramu (17-24)
14 Mumazuva aAmraferi mambo weShinari,+ Arioki mambo weErasari, Kedhoraomeri+ mambo weEramu,+ naTidhari mambo weGoimu, 2 vakarwa naBhera mambo weSodhomu,+ Bhisha mambo weGomora,+ Shinabhu mambo weAdma, naShemebheri mambo weZebhoimu,+ namambo weBhira, kureva Zoari. 3 Vese ava vakabatana muBani reSidhimu,+ kureva Gungwa reMunyu.*+ 4 Vakanga vari pasi paKedhoraomeri kwemakore 12, asi mugore rechi13 vakamupandukira. 5 Saka mugore rechi14, Kedhoraomeri nemadzimambo aaiva nawo vakauya vakakunda vaRefaimu kuAshteroti-kanaimu, vaZuzimu kuHamu, vaEmimu+ kuShavhe-kiriyataimu, 6 nevaHori+ mugomo ravo reSeiri+ kusvikira kuEri-parani, iri mugwenga. 7 Vakabva vadzoka, vakasvika paEni-mishpati, kureva Kadheshi,+ vakakunda nyika yese yevaAmareki+ uyewo vaAmori+ vaigara muHazazoni-tamari.+ 8 Panguva iyi, mambo weSodhomu, mambo weGomora, mambo weAdma, mambo weZebhoimu, namambo weBhira, kureva Zoari, vakafora, vakagadzirira kurwisana navo muBani reSidhimu, 9 kurwisana naKedhoraomeri mambo weEramu, Tidhari mambo weGoimu, Amraferi mambo weShinari, naArioki mambo weErasari,+ madzimambo mana achirwa nemashanu. 10 Zvino Bani reSidhimu rakanga rakazara nemakomba ebhitumini, uye madzimambo eSodhomu neGomora akaedza kutiza akawira maari, uye vaya vakasara vakatizira kumakomo. 11 Vakanga vakunda vacho vakabva vatora zvinhu zvese zveSodhomu neGomora nezvekudya zvavo zvese vachibva vaenda.+ 12 Vakatorawo Roti, mwanakomana wemukoma waAbramu, uyo aigara muSodhomu,+ vakaenda naye nezvinhu zvake. 13 Izvi zvaitika, mumwe murume akanga apukunyuka akauya akaudza Abramu muHebheru. Panguva iyoyo Abramu aigara pakati pemiti mikuru yaMamre muAmori,+ munin’ina waEshkori naAneri.+ Varume ava vakanga vakabatana naAbramu. 14 Saka Abramu akanzwa kuti mwana wemukoma wake+ akanga atapwa.* Paakanzwa izvi, akaunganidza varume vake vakadzidziswa kurwa, varanda 318 vakaberekerwa muimba yake, akavatevera kusvikira kuDhani.+ 15 Hwava usiku, akakamura mauto ake, uye iye nevaranda vake, vakavarwisa, vakavakunda. Akaramba achivadzingirira kusvikira kuHobha, iri kuchamhembe kweDhamasiko. 16 Akatora zvinhu zvese zvakanga zvapambwa, akanunurawo Roti hama yake, nezvinhu zvake, nevakadzi, nevamwewo vanhu. 17 Abramu paakadzoka achibva kunokunda Kedhoraomeri nemadzimambo aaiva nawo, mambo weSodhomu akabuda kunomuchingura muBani reShavhe, kureva Bani raMambo.+ 18 Uye Merekizedheki+ mambo weSarema+ akauya nechingwa newaini; aiva mupristi waMwari Wekumusorosoro.+ 19 Akabva amukomborera achiti: “Abramu ngaakomborerwe naMwari Wekumusorosoro,Musiki wedenga nenyika; 20 Mwari Wekumusorosoro ngaarumbidzwe,Aisa vadzvinyiriri vako muruoko rwako!” Abramu akabva amupa chegumi chezvinhu zvese.+ 21 Mambo weSodhomu akazoti kuna Abramu: “Ndipe vanhu, wotora hako zvinhu.” 22 Asi Abramu akati kuna mambo weSodhomu: “Ndinosimudza ruoko rwangu ndichipika kuna Jehovha Mwari Wekumusorosoro, Musiki wedenga nenyika, 23 kuti, handisi kuzotora chinhu pazvinhu zvenyu, kubvira pashinda kusvikira patambo yeshangu, kuti musazoti, ‘Ndakapfumisa Abramu.’ 24 Hapana chandiri kuzotora kunze kwezvakatodyiwa nemajaya angu. Asi kana vari varume vakaenda neni, Aneri, Eshkori, naMamre,+ ngavatore havo mugove wavo.”
^ Kana kuti “hama yake yakanga yatapwa.”